A Jumble of English Words and Phrases – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
Author lettwebawPosted on 21 October 2010 21 October 2010 Categories English Lesson, Reproduction
11 thoughts on “A Jumble of English Words and Phrases”
21 October 2010 at 8:31 pm
တလုံးစ နှစ်လုံးစဆိုပေမဲ့ သိပ်အဖိုးတန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
22 October 2010 at 9:17 pm
Dear လို့ အခေါ်ခံရရင်ရော ဆရာ၊ V J Kyaw Zwa လို ရင်ခုန်ချင်လို့။
22 October 2010 at 9:47 pm
ရင်ခုန်ချင်ရင်တော့ ခုန်ပေါ့ဗျာ။ တားရတာ မှတ်လို့။ သို့သော် မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ Sorry, dear. ဆိုရင် “စိတ်မရှိပါနဲ့ အစ်ကိုလေးရယ်” “စိတ်မရှိပါနဲ့ ကိုကိုလေးရယ်” ဆိုတာလောက်ပါပဲ။ သိပ်အကြီးကြီး မဟုတ်ဘူးဗျ။
25 October 2010 at 3:03 pm
ကျမသိသလောက် ဘိလပ်မှာတော့ darling တို့ love တို့ကို ရင်းနှီးသမှုနဲ့ လူတကာ သုံးကြတာပဲ။
များသောအားဖြင့် ဈေးအရောင်းဆိုင်တို့လို အမြဲ လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံနေရသူတွေ သုံးကြတာ ကြားမိပါတယ်။
thank you darling .. take care darling … byebye darling စသဖြင့် ပြောလေ့ရှိတာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကြားနေရပါတယ်။ ဥပမာ ဘတ်စကားပေါ်တက်ဖို့ သူတို့ကို အရင်ဦးစားပေးရင် thank you darling လို့ပြောတာမျိုး။ ဈေးဝယ်လို့ ငွေပေးရင် ဈေးသည်က ပြောတာမျိုး အမြဲတမ်းကြုံရလို့ပါ။ ပြောတဲ့သူဘက်ကလဲ သရိုးသရီ ဖြစ်စေတော့ရယ်လို့ ပြောတာဟုတ်ပုံမရသလို ပြောခံရတဲ့သူအနေနဲ့ကလဲ ဘယ်လိုမှ မနေကြပါဘူး။ ဒီလိုသုံးတာဟာ ပိုရင်းနှီးစိတ် ဖြစ်စေပြီး ချစ်စရာ အလေ့အထလို့ မြင်မိပါတယ်။
ကျမသတိထားမိသလောက်တော့ မြောက်ပိုင်းသားတွေက love ဆိုတဲ့စကားလုံးကို နောက်ဆုံးမှာ ထည့်သုံးကြပြီး အလယ်ပိုင်းသားတွေက darling ထည့်ပြောတယ်။ တခြားနေရာတွေတော့ မသိဘူး။ ကိုယ်နေခဲ့ဖူးတဲ့ ဒေသမှာ သုံးလေ့ရှိတာ ကြုံဖူးလို့ပါ။
26 October 2010 at 9:13 pm
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာမ။ အင်မတန် ကောင်းတဲ့ ကွန်မန့်ပါ။ မှန်ပါတယ်။ တကယ်တော့ အင်္ဂလိပ်လို ဒါလင်ဟာ အချစ်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘဲ ခင်မင်နှစ်လိုစွာ ခေါ်ဝေါ်တဲ့ စကားလုံးပါ။ ဈေးသည်ဆိုတော့ နှုတ်ချိုတာပေါ့။ မြန်မာလို အစ်ကိုတန် အစ်ကို၊ အစ်မတန် အစ်မ၊ အမေတန် အမေ၊ ဦးလေးတန် ဦးလေးခေါ်လိုက်သလိုမျိုးပါပဲ။
ဒါလင်ကြောင့် ရင်ခုန်လိုသူများအတွက် စိတ်အထာကျနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျ။ 😦
28 October 2010 at 6:45 pm
ဘိလပ်သူ ဆံပင်ရွှေရောင်နဲ့ အန်တီကြီးတွေနဲ့များ မဆုံလိုက်နဲ့..ဒါလင် ဒါလင်နဲ့ ဒါလင် ဟိုဟာလေး ဟိုလိုလုပ် ၊ ဒီဟာလေး ဒီလိုလုပ်ဆိုပြီး ဘွားတော်ကြီးတွေက ဒါလင်ချင်းထပ်အောင် လွှတ်ခိုင်းတော့တာပါပဲ ဆရာ။
တစ်ခါ လေဆိပ်တစ်ခုမှ အန်တီကြီး၂ယောက်နဲ့ ဆုံတာ…သမီးက တစ်ယောက်တည်း ပစ္စည်းကလည်း ကျောပိုးအိတ်သာပဲ ဆိုတော့ ဒါလင်…စိတ်မရှိဘူးဆိုရင် ဒါလေး ကူသယ်ပေးမလားဟင်…ဆိုတာကနေ စတာပါပဲ ဆရာ။ ဒါလင် ဆိုလို့ သတိရသွားလို့ ပြောပြတာပါ။ မကူညီချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကူညီပေးလိုက်ပါတယ် ကုသိုလ်လည်းရတယ်လေ။ 😀 အမေအရွယ်တွေတောင် မကဘဲ။
13 November 2010 at 11:35 am
13 November 2010 at 12:44 pm
ခက်ပါ့။ သည်ပို့(စ်)မှာ ပါသလေ။ Atta Kyaw ဆိုတာ FB ပေါ့ကွဲ့ ကလေးမရဲ့။ (ဒုံ… ဂလွမ်… ဂလွမ်… ဂလွမ်) 😀
19 September 2014 at 5:11 pm
အိမ်သာမဲကို သုံးနေပြီးတော့ ကိုကြီးကျော်ဖော်ပြထားတဲ့ “ဖွဘွတ်စာမျက်နှာက သည်မှာပါ “ဆိုတာတောင် မတွေ့ဘူးလား သမီးကြီးဂျေဂျေရယ်။
14 April 2011 at 4:31 pm
loads of thzs.
တစ်ခုလောက်မေးချင်ပါ တယ်၊အားမနာပါနဲ့ ဆိုတာကို english လို ဘယ်လိုသုံးရမှာလဲ?ပြောပြပေးပါလား.
အဲ… ဒွတ်ခ။ အပေါ်က ပို့(စ်)မှာ အသေအချာ အကျအန ပါနေလျက်သားနဲ့ အခုလိုမျိုးကြီး လာပြန်မေးနေတော့ပေါ့နော်… ဘယ်လို ပြန်ပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ပါဘူးပေါ့နော်… 😦
Previous Previous post: You may copy and paste my writings, but…
Next Next post: A Seasonal Piece